केसी र सरकारबीच दूरी झनै बढ्दो, १४ दिनदेखि अनसनरत केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने जटिल बन्दै
Friday, 13 Jul, 2018 9:04 AM
२९ असार काठमाडौ । बिगत १४ दिनदेखि अनसनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था झन् पछि झनै जटिल बनिरहँदा सरकारसँगेको दुरी भने बढ्दै गएको छ । केसीको समर्थनमा रहेको चिकित्सक संघले आफुहरु सहजीकरण गर्न तयार रहँदा पनि सरकारले वार्ता टोली समेत गठन नगरेर दम्भ देखाएको आरोप लगाएको छ भने सरकारका पदाधीकारी केसी काठमाडौ आएपछि मात्र वार्ता हुने अडान राख्दै आएको छ । चिकित्सक संघले सरकार समाधानतिर नलागेर दबाएर जाने भन्नेमा लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ। बिहीबार केसीका कतिपय मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने ठानिएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकसंसदमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहे पनि अन्तिम समयमा कार्यसूचीबाट हटाइएको थियो।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको माग गर्दै अनशन शुरु गरेका डा. गोविन्द केसीको अनशन लम्बिंदै जाँदा उनको स्वास्थ्य स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएका छन् । चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले अहिले विभिन्न दलका प्रमुख नेताहरुलाई उनको स्वास्थ्य र मागबारे निकास खोज्न आग्रह गर्दै भेटघाट गरिरहेको छ। आफुहरु सरकार र डाक्टर केसीका बीचमा सहजीकरण गर्न तयार रहेको जानकारी दिएको संघले सरकारले वार्ता टोली समेत गठन नगरेर समस्या बल्झाएको आरोप लगाएको छ। विगतमा डाक्टर केसीले पटक पटक गरेका अनशन र सरकारसँग भएका वार्ताको उपलब्धि रुपमा हेरीएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश समेत निष्कृय भैसकेको छ। तर डाक्टर केसीले भने अध्यादेश अनुरुपकै विधेयक ल्याउनु पर्ने माग राख्दै आएका छन्।
वर्तमान सरकारले परिमार्जन सहित विधेयक संसदमा लगेपछि त्यसको विरोध भएको थियो। त्यसमा लचिलो हुने र डाक्टर केसीका मागका सम्बन्धमा वार्ता टोली गठन गरेर छलफल गर्ने मनस्थितिमा सरकार देखिँदैन। शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणी पोखरेल भन्छन् ‘विगतमा पनि वार्ता टोलीमा रहेकाहरुले सहमति गर्नु भयो, उहाँले मान्नु भएन। उहाँको स्वास्थ्य स्थिति र अन्य परिस्थितिका कारण पहिले उहाँलाई काठमाडौं ल्याउँ, अनि अन्य कदम चालौंला’ । सरकारले वार्ता टोली गठन गरे केसीले जुम्लामा अनशन गर्दै गर्दा पनि वार्ताका लागि काठमाडौंमा उनको तर्फबाट छलफल गर्न टोली तयार रहेको उनका एकजना सहयोगी डा जीवन क्षेत्रीले बताए।
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथि संसदमा पनि सहज ढंगले छलफल हुने अवस्था छैन। विधेयकमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराएका कांग्रेस नेता गगन थापाले भने,मसँग संख्या छ त्यसकारण जस्तो विधेयक मैले चाहेको त्यस्तै अनुरुप मैले पारित गरेर जान्छु भन्ने सोचमा सरकार देखिन्छ। त्यस्तो बेलामा त्यसले अनपेक्षित मुठभेडको स्थिति पनि निम्त्याउन सक्छ’।
सरकार र अनशनरत डाक्टर केसी दुबै पक्ष आफ्नो अडानबाट पछाडि हटने मनस्थितिमा नदेखिंदा उनको अनशन लम्बिंदै जाने र देशभरका चिकित्सक समेत आन्दोलनमा उत्रने अवस्था सृजना हुँदै गएको देखिन्छ। केसीको अनशनप्रति ऐक्यवद्धता देखाउँदै चिकित्सकहरुले एक घण्टा काम छोडेर विरोध प्रर्दशन शुरु गरेका बेला सरकारले उनीहरुलाई समेत कारवाहीको चेतावनी दिएको र त्यसले समाधान नदिने चिकित्सक संघका पदाधिकारीहरुको भनाइ छ।